Zulu Banking Glossary - Tyme Bank
Lokhu kulapho uma uvula i-akhawunti yase-TymeBank nge-app ye-TymeBank, ozobe uyidawunilode ku-Google Play, ku-App Store noma ku-AppGallery. Uma uvula i-akhawunti usebenzisa i-app yase-TymeBank, iphephile futhi ivikelekile ngoba ifunda ubuso bomuntu ukuze ifakazele ukuthi nguwe.
Ama-kiosk ase-TymeBank amatafula amancane, esikhashana, azimele lapho ungavula khona i-akhawunti yase-TymeBank, ulande khona ikhadi lakho lamahhala ledebithi le-Visa, ulungise iphrofayela yakho nokunye. I-kiosk yase-TymeBank ayiyona i-ATM, ngakho awukwazi ukudonsa noma ukudiphozitha imali ku-kiosk. Kodwa-ke, ungadonsa imali mahhala kuwo wonke ama-Pick n Pay nama-Boxer ngekhadi lakho lase-TymeBank.
I-USSD imelela ukuthi “unstructured supplementary service data”. Uhlobo lobuchwepheshe bezokuxhumana obunikeza amasevisi ezezimali ngomakhalekhukhwini. Uma udayela inombolo ene-* ekuqaleni kanye ne-# ekugcineni, usebenzisa i-USSD.
Umshini wokukhipha imali (i-ATM) umshini okuvumela ukuba wenze izinto eziyisisekelo zasebhange, njengokukhipha nokufaka imali, ngaphandle kokuba ungene ngaphakathi ebhange noma usizwe umuntu othatha imali ebhange. Ungasebenzisa i-ATM yanoma iliphi ibhange ukudonsa imali ku-akhawunti yakho yase-TymeBank.
I-electronic funds transfer (i-EFT) ithatha imali kwenye i-akhawunti iyise kwenye ngemishini isebenzisa inethiwekhi yamakhompuyutha. Okwenziwa kuma-EFT kwaziwa nangokuthi i-electronic banking noma i-internet banking futhi kungenziwa ngokungena kuphrofayela yakho yasebhange kukhompuyutha noma kumakhalekhukhwini wakho. Ukuze uthole izimali ngokushesha, yenza izinkokhelo ze-EFT phakathi kuka-8am no-3pm phakathi neviki, uma nje kungewona amaholide omphakathi.
I-Saswitch yisistimu yokushintsha ekuvumela ukuba usebenzise cishe noma iyiphi i-ATM ukuze udonse noma udiphozithe imali, kungakhathaliseki ukuthi ubhaliswe kuliphi ibhange.
Lolu hlobo lwediphozi lukuvumela ukuba ukhokhele abasebenzi ngama-elekthronikhi. Ngemuva kokuqedela imininingwane yamaholo, utshela umhlinzeki wesevisi yamadiphozi aqondile inani okufanele lifakwe ku-akhawunti yasebhange yomsebenzi ngamunye, bese umhlinzeki wesevisi yamadiphozi aqondile edlulisela leyo mali kuma-akhawunti abasebenzi ngosuku lomholo.
Ama-wire transfer ayindlela esheshayo yokuthumela imali. Ngokuvamile asetshenziselwa izinkokhelo ezinkulu, ezingavamile, ngoba kunezinhlawulo ezithintekayo. Ungasebenzisa ama-wire transfer ukukhokhela abadayisi, noma ukukhipha idiphozi yesakhiwo noma yemishini.
Amaphoyinti e-Smart Shopper
Lawa amaphoyinti obuqotho ase-Pick n Pay ongawathola uma uswayipha futhi ukhokha ngekhadi lakho ledebithi lase-TymeBank kunoma isiphi isitolo soqobo noma ku-inthanethi. Ungasebenzisa amaphoyinti akho e-Smart Shopper kunoma iyiphi i-Pick n Pay.
Ukuqinisekiswa kweminwe nokufunda ubuso
Ukuqinisekiswa kweminwe kushiwo ubuchwepheshe bokuvikeleka obusebenzisa izinto zemvelo zomuntu, njengezigxivizo zeminwe, ukuqinisekisa ubuyena. Ukufunda ubuso kungenye indlela yokuqinisekiswa ngezinto ezisemzimbeni, lapho kusetshenziswa khona izimpawu zobuso bomuntu ukuqinisekisa ubuyena.
Ukuqinisekisa kwezakhi ezimbili
Ukuqinisekisa kwezakhi ezimbili kuyindlela yokuqinisekisa ngama-elekthronikhi ekuvulela ulwazi lwakho siqu uma usuqinisekise ubuwena ngezinhlobo ezimbili zobufakazi. Ngokwesibonelo, uma ukhokha nge-app yase-TymeBank, uzokwazi ukuvula i-akhawunti yakho ngohlelo olufunda ubuso noma ngephini yakho. Futhi uzothunyelelwa iphini esetshenziswa kanye kuphela nge-SMS ukuze kuqinisekiswe ukuthi ungumuntu ofuna ukukhokha.
Inzalo ku-akhawunti yakho yokulondoloza isho inani lemali ibhange ekukhokhela lona ngokugcina imali yakho ebhange. Inzalo ibalwa ngenani elingamaphesenti azuzwe ngonyaka ngokugcina imali yakho ku-akhawunti yakho. E-TymeBank, ungazuza inzalo efinyelela ku-8% ngonyaka emalini eku-akhawunti yakho ye-GoalSave.
Inzalo ezuziwe yinani lenzalo oyizuze esikhathini esithile ngemali elondoloziwe, futhi uyikhokhelwa ngochungechunge lwezinkokhelo zasikhathi sonke. Ngokwesibonelo, uma ufaka u-R1 000 ku-akhawunti yakho ye-GoalSave, uzozuza inzalo engu-R80 esikhathini esiwunyaka uma ufanelekela ukuthola inzalo ye-GoalSave engu-8%.
Inzalo enqwabelanayo imane isho ukuzuza inzalo ngemali oyilondolozile, futhi ekugcineni, nangenzalo etholwa yileyo mali oyilondolozile. Uma ushesha uqale ukulondoloza, uzokwazi ukuzuza inzalo enqwabelanayo ethe xaxa.